October 3, 2021 – Shwe Myanmar
“မွနျမာငှေ ကွေး ဖောငျး ပှ မှု ကွောငျ့ ဒျေါ လာ အစားထိုး F E C မြား ပွနျလညျသုံးလာနိုငျဖှယျရှိ”
မြန်မာငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့် ဒေါ်လာအစားထိုး FEC များ ပြန်လည်သုံးလာနိုင်ဖွယ်ရှိ
ယခင်စစ်အစိုးရခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်သမျှ နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာကို လက်ဝယ် ကိုင်ဆောင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ မိမိထံမှာ ရှိတဲ့ ‌ဒေါ်လာနိုင်ငံခြားငွေကို အစိုးရထံအပ်နှံထားပြီး၎င်းတို့ပြန်ပေးတဲ့ FEC ကိုဒေါ်လာအစားထိုးကိုင်ဆောင်သုံးစွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရောက်တာနဲ့ မိမိတို့ ပါလာတဲ့ ‌နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာတွေကို FEC ဖြင့်လဲလှယ်သုံးရပါတယ်။ ဒေါ်လာအစားထိုး FEC ဟာပြည်တွင်းမှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကိုအလည်လာရောက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ သုံးလို့ ပိုနေတဲ့ FEC ကို ‌ဒေါ်လာ လေဆိပ်မှာပြန်လည်လဲလှယ်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံခြားငွေဒေါ်လာကို ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲ ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။
ကိစ္စအမျိုးမျိုးနဲ့ နိုင်ငံခြားရပ်ခြားသို့ သွားမယ့်သူတွေ အခြားလေဆိပ်ရောက်သည့်အခါမှာ show money ပြရပါတယ် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုံးထားသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် ထိုအချိန်က ဒေါ်လာမှောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အဆမတန်ကြီးထွားလာခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ ဒေါ်လာမှောင်ခိုဝယ်တဲ့သူတွေ များပြားလာပါတယ်။
တရားဝင် ငွေကြေးလဲလှယ်တဲ့ဈေးကွက်မဟုတ်တာကြောင့် ဒေါ်လာအရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မြန်မြန်ပေး မြန်မြန်လဲ မြန်မြန်ပြေးစနစ်နဲ့ လုပ်ကြရပါတယ်။ ထိုစဉ်က အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ(၉၀၀/၉၅၀)အထိ ဈေးပေါက်ပြီးအမြင့်ဆုံး တစ်ဒေါ်လာကို ၁၀၀၀ ကျပ်အထိအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖေါင်းပွမှု အခြေအနေတွေကိုအချိန်မှီမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့ မကြာခင်မှာပဲ ဒေါ်လာမှောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ရှိသလိုတစ်ချိန်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ FEC စနစ်တွေပါပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။
ယခငျစဈအစိုးရခတျေမှာမွနျမာနိုငျငံသားမှနျသမြှ နိုငျငံခွားငှေ ဒျေါလာကို လကျဝယျ ကိုငျဆောငျခှငျ့လုံးဝမရှိပါဘူး။ မိမိထံမှာ ရှိတဲ့ ‌ဒျေါလာနိုငျငံခွားငှကေို အစိုးရထံအပျနှံထားပွီး၎င်းငျးတို့ပွနျပေးတဲ့ FEC ကိုဒျေါလာအစားထိုးကိုငျဆောငျသုံးစှဲရတာဖွဈပါတယျ။
မညျသညျ့နိုငျငံသားမဆိုအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျရောကျတာနဲ့ မိမိတို့ ပါလာတဲ့ ‌နိုငျငံခွားငှေ ဒျေါလာတှကေို FEC ဖွငျ့လဲလှယျသုံးရပါတယျ။ ဒျေါလာအစားထိုး FEC ဟာပွညျတှငျးမှာတော့ တှငျတှငျကယျြကယျြကောငျးကောငျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
မွနျမာပွညျကိုအလညျလာရောကျတဲ့ နိုငျငံခွားသားတှအေနနေဲ့ သုံးလို့ ပိုနတေဲ့ FEC ကို ‌ဒျေါလာ လဆေိပျမှာပွနျလညျလဲလှယျလို့ရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံသားတှအေနနေဲ့ကတော့ မွနျမာပွညျတှငျးမှာ နိုငျငံခွားငှဒေျေါလာကို ကိုငျဆောငျသုံးစှဲ ခှငျ့လုံးဝမရှိပါဘူး။
ကိစ်စအမြိုးမြိုးနဲ့ နိုငျငံခွားရပျခွားသို့ သှားမယျ့သူတှေ အခွားလဆေိပျရောကျသညျ့အခါမှာ show money ပွရပါတယျ ဗဟိုဘဏျက သတျမှတျထားတဲ့ နှုံးထားသတျမှတျခကျြတှကွေောငျ့ ထိုအခြိနျက ဒျေါလာမှောငျခိုစြေးကှကျကွီးဟာ မွနျမာပွညျတှငျးမှာ အဆမတနျကွီးထှားလာခဲ့တယျ။ ရနျကုနျမွို့အနှံ့ ဒျေါလာမှောငျခိုဝယျတဲ့သူတှေ မြားပွားလာပါတယျ။
တရားဝငျ ငှကွေေးလဲလှယျတဲ့စြေးကှကျမဟုတျတာကွောငျ့ ဒျေါလာအရောငျးအဝယျလုပျတဲ့အခါမှာ နှဈဦးနှဈဖကျ မွနျမွနျပေး မွနျမွနျလဲ မွနျမွနျပွေးစနဈနဲ့ လုပျကွရပါတယျ။ ထိုစဉျက အမရေိကနျ တဈဒျေါလာကိုမွနျမာငှေ(၉၀၀/၉၅၀)အထိ စြေးပေါကျပွီးအမွငျ့ဆုံး တဈဒျေါလာကို ၁၀၀၀ ကပျြအထိအရောငျးအဝယျဖွဈတာတှလေညျးရှိခဲ့ပါတယျ။
“ဒူးနာ၊ ခါးနာပွီး အထိုငျခကျအထခကျနသေူမြားအတှကျ”
ဒူးနာ၊ ခါးနာပြီး အထိုင်ခက် အထခက် နေသူများအတွက်
ခါးနာခါးကိုက် ၊ဒူးနာဒူးကိုက် ၊ထိုင်ရခက်ထရ ခက်၊ လက်မောင်း လက်ဆစ် အဆစ်အမြစ် ၊အကိုက်အခဲ အားလုံးအတွက်
ခါးနာ၊ ဒူးနာ၊ ထိုင်မရ ထမရ၊ ခြေကိုက်၊ လက်ကိုက်၊ လက်မောင်း လက်ဆစ်ကိုက် အာလုံး ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ခမ်းခြောက်
နည်းပါးသွားခြင်းနဲ့အတူ အပူအောင်းအပူခို အကြောလွှဲနေတာမှန်သမျှ ဖြစ်တဲ့နေရာကို
ကြက်ဆူဆီ (Castor oil )
အသားထဲ စိမ့်ဝင်နေအောင် လိမ်းပေးပါ
စေးပျစ်နေခဲ့ရင် ဆီတစ်မျိုးမျိုး အနည်းငယ်ရောစပ်ပြီး ပွတ်လိမ်းပေးပါ။
လိမ်းတာနဲ့ ဆီသွင်းတာမတူပါဘူး။ ဆီသွင်းတယ်ဆိုတာ ဆီကို အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင်
ဆီပျောက်တဲ့ထိ လိမ်းရတာပါ။တစ်ခါလိမ်းရင် မိနစ်နှစ်ဆယ် နာရီဝက်ခန့်ကြာတတ်ပါတယ်။
ဆီပျောက်ပြီဆို နောက်တစ်ခါ ထပ်ယူပြီး ထပ်လိမ်းပွတ်သွင်း။ တစ်နေ့ကို နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်
ပွတ်လိမ်းသွင်းလိုက်ရင် တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း သိသိသာသာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါမယ်။
အတွေ့အကြုံ လက်တွေ့အရ ကြက်ဆူဆီ သာ လိမ်း ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ
ကလေး ဝမ်းနုတ်ဆေး ကြက်ဆူဆီ (Castor oil ) မေးဝယ်လျှင် ရပါတယ်။
ဗူးကြီးဗူးသေးအလိုက် တစ်ဗူး ၆၀၀ ကျပ်နဲ့၁၀၀၀ ကျပ်ကျော် ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
ဒူးနာ၊ ခါးနာပွီး အထိုငျခကျ အထခကျ နသေူမြားအတှကျ
ခါးနာခါးကိုကျ ၊ဒူးနာဒူးကိုကျ ၊ထိုငျရခကျထရ ခကျ၊ လကျမောငျး လကျဆဈ အဆဈအမွဈ ၊အကိုကျအခဲ အားလုံးအတှကျ
ခါးနာ၊ ဒူးနာ၊ ထိုငျမရ ထမရ၊ ခွကေိုကျ၊ လကျကိုကျ၊ လကျမောငျး လကျဆဈကိုကျ အာလုံး ရိုးတှငျးခဉျြဆီ ခမျးခွောကျ
နညျးပါးသှားခွငျးနဲ့အတူ အပူအောငျးအပူခို အကွောလှဲနတောမှနျသမြှ ဖွဈတဲ့နရောကို
ကွကျဆူဆီ (Castor oil )
အသားထဲ စိမျ့ဝငျနအေောငျ လိမျးပေးပါ
စေးပဈြနခေဲ့ရငျ ဆီတဈမြိုးမြိုး အနညျးငယျရောစပျပွီး ပှတျလိမျးပေးပါ။
လိမျးတာနဲ့ ဆီသှငျးတာမတူပါဘူး။ ဆီသှငျးတယျဆိုတာ ဆီကို အသားထဲစိမျ့ဝငျသှားအောငျ
ဆီပြောကျတဲ့ထိ လိမျးရတာပါ။တဈခါလိမျးရငျ မိနဈနှဈဆယျ နာရီဝကျခနျ့ကွာတတျပါတယျ။
ဆီပြောကျပွီဆို နောကျတဈခါ ထပျယူပွီး ထပျလိမျးပှတျသှငျး။ တဈနကေို့ နံနကျတဈကွိမျ ညတဈကွိမျ
ပှတျလိမျးသှငျးလိုကျရငျ တဈရကျ နှဈရကျအတှငျး သိသိသာသာ သကျသာပြောကျကငျးသှားပါမယျ။
အတှအေ့ကွုံ လကျတှအေ့ရ ကွကျဆူဆီ သာ လိမျး ရပါတယျ။ အင်ျဂလိပျဆေးရောငျးတဲ့ ဆိုငျတှမှော
ကလေး ဝမျးနုတျဆေး ကွကျဆူဆီ (Castor oil ) မေးဝယျလြှငျ ရပါတယျ။
ဗူးကွီးဗူးသေးအလိုကျ တဈဗူး ၆၀၀ ကပျြနဲ့၁၀၀၀ ကပျြကြျော ဝနျးကငျြရှိပါတယျ။
“မွနျမာနိုငျငံဘကျ သို့သာ မကျြနှာမူနတေယျ ဆို တဲ့ ထူးဆနျးလှသညျ့ ထိုငျးနိုငျငံမှ မွဘုရား အကွောငျး”
မြန်မာနိုင်ငံဘက် သို့သာ မျက်နှာမူနေတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းလှသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြဘုရား အကြောင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကို အလည်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများကတော့ မြဘုရားကို ပထမဆုံးဦးတိုက် ရှိခိုးလေ့ရှိပါတယ်။ မနက်ပိုင်း (၈)နာရီခွဲမှ ညနေပိုင်း(၃)နာရီအထိ ဖွင့်ပါတယ်။ဘုရားဖူးသွားမည့် ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ဘောင်းဘီအတို၊ အကြပ်များ၊ စကတ်အတိုများ၊ လည်ဟိုက်အင်္ကျီ၊T-shirt ဝတ်ဆင်ခြင်း မပြုရပါဘူး။
အကယ်၍ ဝတ်သွားမိခဲ့ပါက အဝင်ဝတွင် အဝတ်လဲခန်းနှင့် အဝတ်ငှားရမ်းသော နေရာများတွင် ကျသင့်ငွေပေးဆောင်၍ ငှားဝတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားဝင်းပြင်ပတွင်လည်း စပန့်သား ဘောင်းဘီများအရှည်များကိုလည်းရောင်းချပေးနေသည့်အတွက် ဧည့်သည်များအ နေဖြင့် အဆင်ပြေစွာဝယ်ယူဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ် ။
ဒီမြဘုရားဟာ အနော်ရထာ ဘုရင်ကို သီဟိုဠ် ဘုရင်ကလက်ဆောင် ဆက်သထားပြီး ပုဂံကို အပို့လမ်းမှာမုန်တိုင်း မိပြီး ထို င်းကမ်းခြေမှာ သင်္ဘော ဆိုက်တော့ပို့ခိုင်းသူများက ကြောက်ပြီး ဆက်မပို့ ရဲတော့လို့ကုန်းလမ်း ကနေ လာအို နိုင်ငံကို ရောက်သွားခဲ့ပြီးလာအို ဘုရင်ကတမြတ်တနိုး ကိုးကွယ် ထားတဲ့ဆင်းတုတော်ပါ။
ဒီအကြောင်းကို သီဟိုဠ် ဘုရင်က သိတော့ အနော်ရထာဘုရင်ထံ အကြောင်းကြား လာပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ လုံးကဘုရင် တွေနဲ့ မိတ်မပျက်ချင်တဲ့ အနော်ရထာ ဘုရင်ကသီဟိုဠ် ဘုရင်ကိုပါ ဖိတ်ခေါ်ပြီး မြဘုရားကို လာအိုဘုရင်ထံရေစက်ချ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အနော်ရထာ ဘုရင်ဆီက မျက်နှာသာရလိုမှု ကိုသာအဓိက ထားတဲ့ သီဟိုဠ် ဘုရင်ဟာ ခုလိုအနော်ရထာဘုရင်နဲ့ အတူ အလှူရှင် အဖြစ်ရေစက်ချခွင့်ရတဲ့ အတွက်ကျေနပ် သလို စစ်တိုက်ပြီးဖြစ်စေ၊ သံတမန် လွှတ်ပြီးဖြစ်စေပြန်ယူရင် အဲဒီ ခေတ်က အင်အားကြီးတဲ့ အနော်ရထာဘုရင်ကို မြဘုရား ပြန်ပေးရမှာသေချာ နေပေမယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ သဒ်ဓါတရားကို ခုလို
အသိအမှတ်ပြုလေးစားစွာ ရေစက်ချ လှူပေးတဲ့အတွက် လာအိုဘုရင်ကလဲ အနော်ရထာ မင်းမြတ်ကို ပိုကြည်ညို လေးစားခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းကဆိုပါတယ် ဒီလိုသမိုင်းကြောင်းကြီးတဲ့ မြဘုရားကိုမှ ထိုင်းကလာအို နိုင်ငံကနေ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ယူခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းဟာ လာအိုနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ပြီးလာအို နိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်း မြို့တော်လွမ်ပရာဘမ်ကမြ ဘုရားကို ထိုင်းနိုင်ငံကို ပင့်ဆောင်လာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့သာ မျက်နှာမူနေတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းလှသော ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြဘုရား အကြောင်း 4မြဘုရားသည် ဆူကိုထိုင်း ခေတ် AD- 1438 ကပင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုင်းရာမ ဘုရင် ၁(1782-1809) သည်။ AD- 1782 တွင် လာအိုနိုင်ငံဗီယင်တိန်းမြို့မှ ရရှိသော မြဘုရားကို သူ၏နန်းတော် ဘန်ကောက်မြို့တော်အတွင်း
တစ်ပါ တည်းတည်ဆောက်ခဲ့လေသည်၊ မြဘုရားသည် တကယ်တော့မူကြီးမားသော ကျောက်စိမ်းတုံးမှ ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။ ရာဇဝင်သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲတွင်မူ AD- 1434 လောက်က ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ယခု ချင်းရိုင်ခရိုင် (Chiangrai) တွင် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကို အင်္ဂတေများဖုံးအုပ်လျက်တွေ့ရှိခဲ့ရလေသည်။
ဆင်းတုတော်ကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တစ်ပါး၏ ကျောင်းထံသို့ ပင့်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တဈနေ့သော အခါဆငျးတုတျော၏ နှာခေါငျးတျောနရောမှ အင်ျ ဂတမြေားသညျ အဖတျလိုကျ အလိပျလိပျကှာကပြွီးအတှငျးမှာ ရောငျခွညျစိမျးမြား ပြံ့လှငျ့နသေညျကိုဆရာတျောက တှေ့ရှိလို ကျရလသေညျ။
ဆရာတော်က အင်္ဂတေများအားလုံးကို ဆင်းတုတော်မှ ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ မြဘုရားဆင်းတုတော်ကို ဖူးမြင်လိုက်ရတော့သည်။ ထိုသတင်းကိုကြားကြသောအခါ လူအများသည်မြဘုရားကိုဖူးကြဖို့ စုရုံးလာကြတော့သည်။ ထိုအချိန်ကချင်းရိုင်နယ်သည် ချင်းမိုင် (Chiangmai) ဘုရင်၏ လက်အောက်တွင်ရှိနေသည်။ ထို့နောက်ဘုရင်ဆမ်ဖန်ကင်န်က မြဘုရားကို ချင်းမိုင်သို့ပင့် ဆောင်ရန် ဆင်တော်ကို လွှတ် လိုက်လေသည်။
သို့သော် အကြိမ်တိုင်းတွင် ဆင်တောက လမ်းဆုံရောက်သော အခါ၌ လမ်းပန်း (Lampang ) မြို့တွင်းသို့ ပြေးပြေးဝင်ရောက်သွားခဲ့လေသည်။ ဆင်တော်ကသုံးကြိမ်တိုင်တိုင် လမ်းပန်းမြို့တွင်းသို့ ပြေးဝင်ပုံကိုထောက်ရှုပြီး ဘုရင်က မြဘုရားသည် လမ်းပန်းမြို့၌ စံပယ်တော်မူလိုသည်ဟု အတွေးရပြီးနောက်ဆင်းတုတော်ကို
နှစ်ပေါင်း ၃၂ နှစ်တိုင်တိုင် တန်ခိုးထက်သော ချင်းမိုင်ဘုရင် တိလောကTiloka စိုးစံသော AD- 1468 အထိ လမ်းပန်းမြို့တွင် စံပယ်ထားခဲ့လေသည်။ AD- 1551 တွင် ချင်းမိုင်ဘုရင်သည် သားတော်မကျန်ရစ် ဘဲနတ်ရွာစံလေတော် သမီးတော်တစ်ပါးက လာအိုဘုရင်နှင့် စုလျားရစ်ပတ်လေသည်။
သမီးတော် ချိုင်းချက်သChaichettha မင်းသားဖွား မြင်တော်မူသည်။ချင်းမိုင်ဝန်ကြီးများက ၁၅ နှစ်အရွယ် မင်းသားကိုထီးနန်းအပ်သောအခါ လက်ခံခဲ့လေသည်။ သို့သော်ငြားလည်း သူ၏ခမည်းတော် လာအိုဘုရင်နတ်ရွာစံသောအခါ မင်းသားသည် သူ၏တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ချင်နေခဲ့တော့သည်။
ထို့ကြောင့် AD- 1552 တွင်မင်းသားသည် လာအိုနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သော LuangPrabang လူအမ်ပရာဘန်သို့ မြဘုရားကို ပင့်ဆောင်သွားခဲ့လေသည်။
မွနျမာနိုငျငံဘကျ သို့သာ မကျြနှာမူနတေယျဆိုတဲ့ ထူးဆနျးလှသညျ့ ထိုငျးနိုငျငံမှ မွဘုရား အကွောငျး
ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့ကို အလညျရောကျခဲ့ပွီဆိုရငျ မွနျမာဗုဒ်ဓဘာသာမြားကတော့ မွဘုရားကို ပထမဆုံးဦးတိုကျ ရှိခိုးလရှေိ့ပါတယျ။ မနကျပိုငျး (၈)နာရီခှဲမှ ညနပေိုငျး(၃)နာရီအထိ ဖှငျ့ပါတယျ။ဘုရားဖူးသှားမညျ့ ဧညျ့သညျမြားအနဖွေငျ့ ဘောငျးဘီအတို၊ အကွပျမြား၊ စကတျအတိုမြား၊ လညျဟိုကျအင်ျကြီ၊T-shirt ဝတျဆငျခွငျး မပွုရပါဘူး။
အကယျ၍ ဝတျသှားမိခဲ့ပါက အဝငျဝတှငျ အဝတျလဲခနျးနှငျ့ အဝတျငှားရမျးသော နရောမြားတှငျ ကသြငျ့ငှပေေးဆောငျ၍ ငှားဝတျနိုငျပါတယျ။ ဘုရားဝငျးပွငျပတှငျလညျး စပနျ့သား ဘောငျးဘီမြားအရှညျမြားကိုလညျးရောငျးခပြေးနသေညျ့အတှကျ ဧညျ့သညျမြားအ နဖွေငျ့ အဆငျပွစှောဝယျယူဝတျဆငျနိုငျပါတယျ ။
ဒီမွဘုရားဟာ အနျောရထာ ဘုရငျကို သီဟိုဠျ ဘုရငျကလကျဆောငျ ဆကျသထားပွီး ပုဂံကို အပို့လမျးမှာမုနျတိုငျး မိပွီး ထို ငျးကမျးခွမှော သင်ျဘော ဆိုကျတော့ပို့ခိုငျးသူမြားက ကွောကျပွီး ဆကျမပို့ ရဲတော့လို့ကုနျးလမျး ကနေ လာအို နိုငျငံကို ရောကျသှားခဲ့ပွီးလာအို ဘုရငျကတမွတျတနိုး ကိုးကှယျ ထားတဲ့ဆငျးတုတျောပါ။
ဒီအကွောငျးကို သီဟိုဠျ ဘုရငျက သိတော့ အနျောရထာဘုရငျထံ အကွောငျးကွား လာပါတယျ။ နှဈနိုငျငံ လုံးကဘုရငျ တှနေဲ့ မိတျမပကျြခငျြတဲ့ အနျောရထာ ဘုရငျကသီဟိုဠျ ဘုရငျကိုပါ ဖိတျချေါပွီး မွဘုရားကို လာအိုဘုရငျထံရစေကျခြ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
အနျောရထာ ဘုရငျဆီက မကျြနှာသာရလိုမှု ကိုသာအဓိက ထားတဲ့ သီဟိုဠျ ဘုရငျဟာ ခုလိုအနျောရထာဘုရငျနဲ့ အတူ အလှူရှငျ အဖွဈရစေကျခခြှငျ့ရတဲ့ အတှကျကနြေပျ သလို စဈတိုကျပွီးဖွဈစေ၊ သံတမနျ လှတျပွီးဖွဈစပွေနျယူရငျ အဲဒီ ခတျေက အငျအားကွီးတဲ့ အနျောရထာဘုရငျကို မွဘုရား ပွနျပေးရမှာသခြော နပေမေယျ့ပွညျသူတှရေဲ့ သဒျဓါတရားကို ခုလို
အသိအမှတျပွုလေးစားစှာ ရစေကျခြ လှူပေးတဲ့အတှကျ လာအိုဘုရငျကလဲ အနျောရထာ မငျးမွတျကို ပိုကွညျညို လေးစားခဲ့တယျလို့ သမိုငျးကဆိုပါတယျ ဒီလိုသမိုငျးကွောငျးကွီးတဲ့ မွဘုရားကိုမှ ထိုငျးကလာအို နိုငျငံကနေ တိုကျခိုကျသိမျးပိုကျ ယူခဲ့ပါတယျ။ ထိုငျးဟာ လာအိုနိုငျငံကို တိုကျခိုကျသိမျးပိုကျ ပွီးလာအို နိုငျငံရဲ့ ရှေးဟောငျး မွို့တျောလှမျပရာဘမျကမွ ဘုရားကို ထိုငျးနိုငျငံကို ပငျ့ဆောငျလာပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဘကျသို့သာ မကျြနှာမူနတေယျဆိုတဲ့ ထူးဆနျးလှသော ထိုငျးနိုငျငံမှ မွဘုရား အကွောငျး 4မွဘုရားသညျ ဆူကိုထိုငျး ခတျေ AD- 1438 ကပငျထိုငျးနိုငျငံတှငျ ရှိနခေဲ့သညျ။ ထိုငျးရာမ ဘုရငျ ၁(1782-1809) သညျ။ AD- 1782 တှငျ လာအိုနိုငျငံဗီယငျတိနျးမွို့မှ ရရှိသော မွဘုရားကို သူ၏နနျးတျော ဘနျကောကျမွို့တျောအတှငျး
တဈပါ တညျးတညျဆောကျခဲ့လသေညျ၊ မွဘုရားသညျ တကယျတော့မူကွီးမားသော ကြောကျစိမျးတုံးမှ ထုလုပျထားခွငျးဖွဈလသေညျ။ ရာဇဝငျသမိုငျးမှတျတမျးထဲတှငျမူ AD- 1434 လောကျက ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျး ယခု ခငျြးရိုငျခရိုငျ (Chiangrai) တှငျ ဗုဒ်ဓဆငျးတုတျောကို အင်ျဂတမြေားဖုံးအုပျလကျြတှရှေိ့ခဲ့ရလသေညျ။
ဆငျးတုတျောကို ကြောငျးထိုငျဆရာတျောတဈပါး၏ ကြောငျးထံသို့ ပငျ့ဆောငျသှားခဲ့သညျ။ တဈနသေ့ော အခါဆငြးတုတြော၏ နှာခေါငြးတောနြရောမှ အငျြ ဂတမွေားသညြ အဖတလြိုကြ အလိပလြိပကြှာကပွှီးအတှငြးမှာ ရောငခြှညစြိမြးမွား ပွံ့လှင့နြသညေကြိုဆရာတောကြ တှရှေိ့လို ကရြလသညြေ။
ဆရာတျောက အင်ျဂတမြေားအားလုံးကို ဆငျးတုတျောမှ ဖယျရှားလိုကျသောအခါ မွဘုရားဆငျးတုတျောကို ဖူးမွငျလိုကျရတော့သညျ။ ထိုသတငျးကိုကွားကွသောအခါ လူအမြားသညျမွဘုရားကိုဖူးကွဖို့ စုရုံးလာကွတော့သညျ။ ထိုအခြိနျကခငျြးရိုငျနယျသညျ ခငျြးမိုငျ (Chiangmai) ဘုရငျ၏ လကျအောကျတှငျရှိနသေညျ။ ထို့နောကျဘုရငျဆမျဖနျကငျနျက မွဘုရားကို ခငျြးမိုငျသို့ပငျ့ ဆောငျရနျ ဆငျတျောကို လှတျ လိုကျလသေညျ။
သို့သျော အကွိမျတိုငျးတှငျ ဆငျတောက လမျးဆုံရောကျသော အခါ၌ လမျးပနျး (Lampang ) မွို့တှငျးသို့ ပွေးပွေးဝငျရောကျသှားခဲ့လသေညျ။ ဆငျတျောကသုံးကွိမျတိုငျတိုငျ လမျးပနျးမွို့တှငျးသို့ ပွေးဝငျပုံကိုထောကျရှုပွီး ဘုရငျက မွဘုရားသညျ လမျးပနျးမွို့၌ စံပယျတျောမူလိုသညျဟု အတှေးရပွီးနောကျဆငျးတုတျောကို
နှဈပေါငျး ၃၂ နှဈတိုငျတိုငျ တနျခိုးထကျသော ခငျြးမိုငျဘုရငျ တိလောကTiloka စိုးစံသော AD- 1468 အထိ လမျးပနျးမွို့တှငျ စံပယျထားခဲ့လသေညျ။ AD- 1551 တှငျ ခငျြးမိုငျဘုရငျသညျ သားတျောမကနျြရဈ ဘဲနတျရှာစံလတေျော သမီးတျောတဈပါးက လာအိုဘုရငျနှငျ့ စုလြားရဈပတျလသေညျ။
သမီးတျော ခြိုငျးခကျြသChaichettha မငျးသားဖှား မွငျတျောမူသညျ။ခငျြးမိုငျဝနျကွီးမြားက ၁၅ နှဈအရှယျ မငျးသားကိုထီးနနျးအပျသောအခါ လကျခံခဲ့လသေညျ။ သို့သျောငွားလညျး သူ၏ခမညျးတျော လာအိုဘုရငျနတျရှာစံသောအခါ မငျးသားသညျ သူ၏တိုငျးပွညျသို့ ပွနျခငျြနခေဲ့တော့သညျ။
ထို့ကွောငျ့ AD- 1552 တှငျမငျးသားသညျ လာအိုနိုငျငံ၏ မွို့တျောဖွဈသော LuangPrabang လူအမျပရာဘနျသို့ မွဘုရားကို ပငျ့ဆောငျသှားခဲ့လသေညျ။
၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်သောအခါကုန်းဘောင်မင်းဆက် ဘုရင်များနှင့်မှူးမတ်များပိုင်ဆိုင်သောအဖိုးတန်အနုပညာလက်ရာများ၊နန်းစဉ်ရတနာများ ထောင်ချီ သောင်းချီ သိန်းချီ၍ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဤအရာများထဲတွင်ဗမာပြည်သူပြည်သားများအသိနည်းသော ဗမာဘုရင်၏တန်ခိုးအာနုဘော်ကိုကိုယ်စားပြုသော တော်ဝင်ရွှေရထားလုံးပါဝင်သည်။ ဗမာ့တော်ဝင်ရထားလုံးများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဇာတ်လမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီခေတ်အကြောင်းသာမကအနောက်နိုင်ငံများကပါမြန်မာနိုင်ငံအားရှုမြင်ပုံကိုပြောပြပါသည်။
ဗမာဘုရင့်တော်ဝင်ရွှေရထားလုံးတော် အား မည်သို့မည်ပုံရရှိလာ၍ ဗမာဘုရင်များ၏ထိုရထားလုံးအားစီးနင်းမှုသမိုင်းကြောင်းရှည်လျားသည်။ ၁၇၉၆ ခုနှစ်တွင်ဘကြီးတော်မင်းကြီးသည်အိန္ဒိယနှင့်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ရှိအချို့သောနယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအတွက်ဗြိတိသျှအစိုးရထံမှဥရောပပုံစံရထားကိုတောင်းခဲ့သည်။
ဗမာ့အင်ပါယာသည် ရခိုင်၊ မဏိပူရ၊ အာသံ၊ ပဲခူနှင့်สยามတို့၏နယ်မြေများကိုမကြာသေးမီက ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီး၊ ဘကြီးတော်မင်းသည်သူ့အိမ်နီးချင်းများထံမှတောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိသည်။ဘုရင်သည် ဗြိတိသျှများထံမှာ“ အင်္ဂလိပ်စတိုင်လ်ဆွဲရထားတစ်စင်း” ကိုတောင်းခဲ့သည်။တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ဗြိတိသျှသံတမန် Hiram Cox ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါဘုရင်ကသူမစီးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အတွင်းရှိဘုရင်ထိုင်ရမည့် ထိုင်ခုံသည်နိမ့်လွန်းလှသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဗမာ့နန်းတွင်းရိုးရာအရ ဘုရင်၏လက်အောက်ခံနယ်စား၊မြို့စား စသည်တို့သည် ဘုရင့်အောက်တွင် နေရမည်ဖြစ်သည် သို့သော် ရွှေရထားလုံးတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တတန်းတည်း ထိုင်နေရသလိုဖြစ်နေသည် ။
ထို့ကြောင့်တော်ဝင်အခမ်းအနားများကျင်းပရန် (သို့) စေတီတော်၌ပူဇော်သက္ကာပြုရန်နန်းတော်မှထွက်ခွာသောအခါဘကြီးတော်မင်းသည်ရထားသစ်ကိုစီးနင်းပြီးသူသည်မိသားစုအား၊မှုးမတ် စသည်တို့အားနောက်ကျော၌လိုက်ပါစေခဲ့သည်။ ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ (၁၈၂၄-၁၈၂၆) တွင်ဗြိတိသျှတို့ကရန်ကုန်ကိုသိမ်းလိုက်သည်၊ ဗမာ့တပ်မတော်သည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီးဘုရင်သည်သူ၏ကျန်တိုင်းပြည်အချိူ့အား
အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဗမာ့တော်ဝင်ရထားလုံးသည်ဗြိတိသျှလက်သို့ကျရောက်လာသည်။ ဗြိတိသျှတပ်များသည်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်နေစဉ်ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦး၏ အမှတ် ၈၉ တပ်ရင်းသည်တနင်္သာရီရှိထားဝယ်မြို့၌အံ့သြဖွယ်ရာအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အလုပ်ရုံတစ်ခုအတွင်းရှိစွန့်ပစ်ထားပုံရ့သည်ဘကြီးတော်မင်းကြီး၏ ဗမာ့တော်ဝင်ရွှေရထားလုံးတော် နှင့်အလွန်တူသောရွှေရထားလုံးတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှဗိုလ်ကြီးသည်ထို ရွှေရထားလုံးအားစစ်သိမ်းပစ္စည်းအဖြစ်လေလံတင်ရောင်းချရန်ကလကတ္တားသို့အလျင်အမြန်စေပို့ခဲ့သည်။လေလံအောင်သူ ပိုင်ရှင်အသစ်သည်Piccadilly Circus ရှိအီဂျစခန်းမ ၌ပြသရန်လန်ဒန်သို့ပို့ခဲ့သည်။
လန်ဒန်ပြတိုက်ရောက်သောအခါ လူအုပ်ကြီးက ဗမာဘုရင့်ရွှေရထားလုံးတော်အား ကြည့်ရန်စုဝေးခဲ့ကြသည်။ ပြတိုက်ဝင်ခွင့် လက်မှတ်ရောင်းအားသည် ယခင်နှစ်အနည်းငယ်ကပြတိုက်ခန်းမ၌ပြသခဲ့သည့်နပိုလီယံ၏ရထားရောင်းအားနှင့်တူသည်။ ရထားလုံးအား မြင်တွေ့လိုက်ရသောအခါ ဗြိတိသျှပြည်သူများသည်အလွန် အံ့သြသွားခဲ့သည်။
ဗမာတော်ဝင်ရထားလုံး၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုရွှေဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်နှင့်အလှဆင်ထားသည်။ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်လက်မှုပညာများနှင့်စီခြယ်ထားသည့်ရတနာများအားအံ့သြခဲ့ကြသည်။ဗြိတိသျှများသည် ထိုလှပသောရထားလုံးကြီးအားကြည့်ရင်း ၎င်းတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း၌မြန်မာပြည်ကို“ ရွှေပြည်” အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။
၁၈၄၇ တွင် Edwin Hughes ၏“ Great Mammoth Equestrian Establishment” အတွက်ဆပ်ကပ်လှည်းအဖြစ်နှင့်တော်ဝင်ရထားလုံးအား လန်ဒန်လမ်းများပေါ်တွင်ကပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်ကွယ်သွားလေတော့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကုန်းဘောင်ဗမာဘုရင်များ၏ကြွယ်ဝမှုများသည်ဗြိတိသျှများအား ဗမာ တနိုင်ငံလုံးအား သိမ်းပိုက်ရန်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့သည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲတွင်ဗမာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုဗြိတိသျှမှသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ဗမာနောက်ဆုံးဘုရင်သီပေါမင်းသည် သေသည်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိမြို့ငယ်တစ်မြို့၌ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနေထိုင်၍ ကံတော်ကုန်ခဲ့ရသည်။ ဗမာဘုရင်များသည်အလွန်လှပသောလှည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော်ငြား နောက်ဆုံးမင်း သီပေါဘုရင်ပါတော်မူချိန်၌ ခမ်းနားလှသော ရွှေရထားလုံးတော်နှင့်ထီးဖြူတော်ဆောင်း၍ပါတော်မမူခဲ့ရပေ။
မန္တလေး မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်မှထွက်ခွါရမည့်အချိန်ရောက်သောအခါ သီပေါဘုရင် နန်းတွင်းရှိမသာအလောင်းများအားထုတ်သည့် အမင်္ဂလာတံခါးမှ ပါတော်မူခဲ့ရ၍ ဗီရိုလှည်းတွင်လိုက်ပါ၍ ပါတော်မူခဲ့ရသည်။ ဘုရင်ပါတော်မူသွားသောအခါဗြိတိသျှတို့သည်၎င်းတို့ထုံးစံအတိုင်း တော်ဝင်မိသားစု၏အကောင်းဆုံးများကိုယူ၍ အင်္ဂလန်သို့ သယ်ဆောင်သွား သည်။
၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်စောင်က“ သီပေါမင်း ၏ရွှေရထားတော်သည်လန်ဒန်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်” ဟုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖော်ပြခဲ့သော်လည်းအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံမပြောတော့ပါ။၁၈၉၉ တွင်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာဆောင်းပါးမှအထူးဆန်းဆုံးသဲလွန်စဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
“ ဗမာဘုရင်ဟောင်း သီပေါ ၏ရွှေမြင်းရထား” ဟုခေါ်သောရထားမောင်းသူများကြော်ငြာများခေါ်ယူသည့် နည်းပြတစ် ဦးအားလန်ဒန်မြို့၌ဒဏ်ရိုက်ခြင်းခံရသည်။ ဤအရာသည်သီပေါမင်း၏တကယ့်မြင်းရထားလား၊ သို့မဟုတ် ပုံစံတူလား?
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာယခုဆိုလျှင်နှစ်ရာကျော် ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံ၌ဗမာဘုရင်များ၏များပြားလှသောတော်ဝင်ရထားများ၏မူရင်းများမှာ မရှိချေ။ အများစုကအချိန်ကြာညောင်းလာသဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။အခိုးခံရသည်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးသွားသည်။
ဗမာပြည်သူများသည် အနာဂတ်မှာအနောက်တိုင်းပြတိုက်များရှိ ခိုးယူခြင်းခံထားရသည့်၊သယ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသည့် ဗမာ့အနုပညာပစ္စည်းတွေကိုဗမာအစိုးရကပြန်တောင်းစေခြင်ကြပါသည်။သို့သော် မသေချာမရေရာမှုကား ရှိနေဆဲပါပဲ။
သို့သော်ဘယ်သူတပ်အပ်ပြောနိုင်မှာလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာဘုရင့်တော်ဝင်ရထားလုံးကြီးပြန်ပေါ်လာတာကိုဗမာပြည်သူ ကျွန်တော်တို့မြင်ချင်ရင်မြင်ရမှာပေါ့။ မျှော်လင့်ချက်ထားခြင်းအတွက်ဘာထိခိုက်မှု၊ဆုံးရှုံးမှု မှမရှိပါဘူး…..ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဟာက အချက်အလက်အချို့မှားချင်ရင်မှားနေနိုင်တာမို့လို့ ကြိုတောင်းပန်ထားပါရစေ၊အမှားတွေ့ပါက ဖြည့်သာဖတ်သွား ပေးကြပါခင်ဗျ။
၁၈၈၅ ခုနှဈတှငျဗွိတိသြှတို့မွနျမာနိုငျငံကိုသိမျးပိုကျသောအခါကုနျးဘောငျမငျးဆကျ ဘုရငျမြားနှငျ့မှူးမတျမြားပိုငျဆိုငျသောအဖိုးတနျအနုပညာလကျရာမြား၊နနျးစဥျရတနာမြား ထောငျခြီ သောငျးခြီ သိနျးခြီ၍ ပြောကျကှယျသှားသညျ။
ဤအရာမြားထဲတှငျဗမာပွညျသူပွညျသားမြားအသိနညျးသော ဗမာဘုရငျ၏တနျခိုးအာနုဘျောကိုကိုယျစားပွုသော တျောဝငျရှရေထားလုံးပါဝငျသညျ။ ဗမာ့တျောဝငျရထားလုံးမြားဖွဈပကျြခဲ့သညျ့ဇာတျလမျးသညျကြှနျုပျတို့အားမွနျမာနိုငျငံကိုလိုနီခတျေအကွောငျးသာမကအနောကျနိုငျငံမြားကပါမွနျမာနိုငျငံအားရှုမွငျပုံကိုပွောပွပါသညျ။
ဗမာဘုရငျ့တျောဝငျရှရေထားလုံးတျော အား မညျသို့မညျပုံရရှိလာ၍ ဗမာဘုရငျမြား၏ထိုရထားလုံးအားစီးနငျးမှုသမိုငျးကွောငျးရှညျလြားသညျ။ ၁၇၉၆ ခုနှဈတှငျဘကွီးတျောမငျးကွီးသညျအိန်ဒိယနှငျ့မွနျမာနယျစပျတလြှောကျရှိအခြို့သောနယျမွပေိုငျဆိုငျခှငျ့မြားအတှကျဗွိတိသြှအစိုးရထံမှဥရောပပုံစံရထားကိုတောငျးခဲ့သညျ။
ဗမာ့အငျပါယာသညျ ရခိုငျ၊ မဏိပူရ၊ အာသံ၊ ပဲခူနှငျ့สยามတို့၏နယျမွမြေားကိုမကွာသေးမီက ၀ ယျယူခဲ့ပွီး၊ ဘကွီးတျောမငျးသညျသူ့အိမျနီးခငျြးမြားထံမှတောငျးဆိုမှုမြားကိုပွုလုပျနိုငျသညျ့အနအေထားတှငျရှိသညျ။ဘုရငျသညျ ဗွိတိသြှမြားထံမှာ“ အင်ျဂလိပျစတိုငျလျဆှဲရထားတဈစငျး” ကိုတောငျးခဲ့သညျ။တောငျးဆိုခကျြအတိုငျး ဗွိတိသြှသံတမနျ Hiram Cox ကလကျဆောငျပေးတဲ့အခါဘုရငျကသူမစီးနိုငျဘူးဆိုတာကိုခကျြခငျြးသဘောပေါကျခဲ့ပါတယျ။
အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော အတှငျးရှိဘုရငျထိုငျရမညျ့ ထိုငျခုံသညျနိမျ့လှနျးလှသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ ဗမာ့နနျးတှငျးရိုးရာအရ ဘုရငျ၏လကျအောကျခံနယျစား၊မွို့စား စသညျတို့သညျ ဘုရငျ့အောကျတှငျ နရေမညျဖွဈသညျ သို့သျော ရှရေထားလုံးတျော၏ ဖှဲ့စညျးပုံအရ တတနျးတညျး ထိုငျနရေသလိုဖွဈနသေညျ ။
ထို့ကွောငျ့တျောဝငျအခမျးအနားမြားကငျြးပရနျ (သို့) စတေီတျော၌ပူဇျောသက်ကာပွုရနျနနျးတျောမှထှကျခှာသောအခါဘကွီးတျောမငျးသညျရထားသဈကိုစီးနငျးပွီးသူသညျမိသားစုအား၊မှုးမတျ စသညျတို့အားနောကျကြော၌လိုကျပါစခေဲ့သညျ။ပထမအင်ျဂလိပျ-မွနျမာစဈပှဲ (၁၈၂၄-၁၈၂၆) တှငျဗွိတိသြှတို့ကရနျကုနျကိုသိမျးလိုကျသညျ၊ ဗမာ့တပျမတျောသညျမငွိမျမသကျဖွဈနပွေီးဘုရငျသညျသူ၏ကနျြတိုငျးပွညျအခြိူ့အား အရှအေိ့န်ဒိယကုမ်ပဏီသို့လှဲပွောငျးပေးခဲ့သညျ။
ဗမာ့တျောဝငျရထားလုံးသညျဗွိတိသြှလကျသို့ကရြောကျလာသညျ။ ဗွိတိသြှတပျမြားသညျမွနျမာနိုငျငံအောကျပိုငျးကိုသိမျးပိုကျနစေဉျဗိုလျမှူးကွီးတဈဦး၏ အမှတျ ၈၉ တပျရငျးသညျတနင်ျသာရီရှိထားဝယျမွို့၌အံ့သွဖှယျရာအရာတဈခုကိုရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့သညျ။
အလုပျရုံတဈခုအတှငျးရှိစှနျ့ပဈထားပုံရ့သညျဘကွီးတျောမငျးကွီး၏ ဗမာ့တျောဝငျရှရေထားလုံးတျော နှငျ့အလှနျတူသောရှရေထားလုံးတျောတဈခုဖွဈသညျ။ ဗွိတိသြှဗိုလျကွီးသညျထို ရှရေထားလုံးအားစဈသိမျးပစ်စညျးအဖွဈလလေံတငျရောငျးခရြနျကလကတ်တားသို့အလငျြအမွနျစပေို့ခဲ့သညျ။လလေံအောငျသူ ပိုငျရှငျအသဈသညျPiccadilly Circus ရှိအီဂစြခနျးမ ၌ပွသရနျလနျဒနျသို့ပို့ခဲ့သညျ။
လနျဒနျပွတိုကျရောကျသောအခါ လူအုပျကွီးက ဗမာဘုရငျ့ရှရေထားလုံးတျောအား ကွညျ့ရနျစုဝေးခဲ့ကွသညျ။ ပွတိုကျဝငျခှငျ့ လကျမှတျရောငျးအားသညျ ယခငျနှဈအနညျးငယျကပွတိုကျခနျးမ၌ပွသခဲ့သညျ့နပိုလီယံ၏ရထားရောငျးအားနှငျ့တူသညျ။ ရထားလုံးအား မွငျတှလေို့ကျရသောအခါ ဗွိတိသြှပွညျသူမြားသညျအလှနျ အံ့သွသှားခဲ့သညျ။
ဗမာတျောဝငျရထားလုံး၏မကျြနှာပွငျတဈခုလုံးကိုရှဖွေငျ့ဖုံးအုပျထားပွီးကြောကျမကျြရတနာပေါငျး ၂၀၀၀၀ ကြျောနှငျ့အလှဆငျထားသညျ။ လာရောကျလညျပတျသူမြားသညျလကျမှုပညာမြားနှငျ့စီခွယျထားသညျ့ရတနာမြားအားအံ့သွခဲ့ကွသညျ။ဗွိတိသြှမြားသညျ ထိုလှပသောရထားလုံးကွီးအားကွညျ့ရငျး ၎င်းငျးတို့၏စိတျကူးစိတျသနျး၌မွနျမာပွညျကို“ ရှပွေညျ” အဖွဈဖနျတီးခဲ့သညျ။
၁၈၄၇ တှငျ Edwin Hughes ၏“ Great Mammoth Equestrian Establishment” အတှကျဆပျကပျလှညျးအဖွဈနှငျ့တျောဝငျရထားလုံးအား လနျဒနျလမျးမြားပျေါတှငျကပွခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ပြောကျခွငျးမလှပြောကျကှယျသှားလတေော့သညျ။ နောကျဆုံးတှငျကုနျးဘောငျဗမာဘုရငျမြား၏ကွှယျဝမှုမြားသညျဗွိတိသြှမြားအား ဗမာ တနိုငျငံလုံးအား သိမျးပိုကျရနျအလှနျဆှဲဆောငျမှုရှိခဲ့သညျ။
၁၈၈၅ ခုနှဈတတိယအင်ျဂလိပျ-မွနျမာစဈပှဲတှငျဗမာတဈနိုငျငံလုံးကိုဗွိတိသြှမှသိမျးပိုကျခဲ့သညျ။ ဗမာနောကျဆုံးဘုရငျသီပေါမငျးသညျ သသေညျအထိအိန်ဒိယနိုငျငံရှိမွို့ငယျတဈမွို့၌ပငျပနျးဆငျးရဲစှာနထေိုငျ၍ ကံတျောကုနျခဲ့ရသညျ။ ဗမာဘုရငျမြားသညျအလှနျလှပသောလှညျးကိုပိုငျဆိုငျထားသျောငွား နောကျဆုံးမငျး သီပေါဘုရငျပါတျောမူခြိနျ၌ ခမျးနားလှသော
ရှရေထားလုံးတျောနှငျ့ထီးဖွူတျောဆောငျး၍ပါတျောမမူခဲ့ရပေ။ မန်တလေး မွနနျးစံကြျောရှနေနျးတျောမှထှကျခှါရမညျ့အခြိနျရောကျသောအခါ သီပေါဘုရငျ နနျးတှငျးရှိမသာအလောငျးမြားအားထုတျသညျ့ အမင်ျဂလာတံခါးမှ ပါတျောမူခဲ့ရ၍ ဗီရိုလှညျးတှငျလိုကျပါ၍ ပါတျောမူခဲ့ရသညျ။ ဘုရငျပါတျောမူသှားသောအခါဗွိတိသြှတို့သညျ၎င်းငျးတို့ထုံးစံအတိုငျး
တျောဝငျမိသားစု၏အကောငျးဆုံးမြားကိုယူ၍ အင်ျဂလနျသို့ သယျဆောငျသှား သညျ။ ၁၈၈၆ ခုနှဈတှငျဗွိတိနျသတငျးစာတဈစောငျက“ သီပေါမငျး ၏ရှရေထားတျောသညျလနျဒနျသို့ရောကျရှိလာခဲ့သညျ” ဟုစိတျဝငျစားဖှယျဖျောပွခဲ့သျောလညျးအကွောငျးအရာနှငျ့ ပတျသကျ၍ ထပျမံမပွောတော့ပါ။
၁၈၉၉ တှငျထုတျဝသေောသတငျးစာဆောငျးပါးမှအထူးဆနျးဆုံးသဲလှနျစဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျသညျ။ “ ဗမာဘုရငျဟောငျး သီပေါ ၏ရှမွေငျးရထား” ဟုချေါသောရထားမောငျးသူမြားကွျောငွာမြားချေါယူသညျ့ နညျးပွတဈ ဦးအားလနျဒနျမွို့၌ဒဏျရိုကျခွငျးခံရသညျ။ ဤအရာသညျသီပေါမငျး၏တကယျ့မွငျးရထားလား၊ သို့မဟုတျ ပုံစံတူလား?
ဝမျးနညျးစရာကောငျးသညျမှာယခုဆိုလြှငျနှဈရာကြျော ရှိပွီဖွဈသျောလညျးမွနျမာနိုငျငံ၌ဗမာဘုရငျမြား၏မြားပွားလှသောတျောဝငျရထားမြား၏မူရငျးမြားမှာ မရှိခြေ။ အမြားစုကအခြိနျကွာညောငျးလာသဖွငျ့ပြောကျကှယျသှားသညျ။အခိုးခံရသညျ။အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ပကျြစီး၊ပြောကျဆုံးသှားသညျ။
ဗမာပွညျသူမြားသညျ အနာဂတျမှာအနောကျတိုငျးပွတိုကျမြားရှိ ခိုးယူခွငျးခံထားရသညျ့၊သယျဆောငျသှားခွငျးခံရသညျ့ ဗမာ့အနုပညာပစ်စညျးတှကေိုဗမာအစိုးရကပွနျတောငျးစခွေငျကွပါသညျ။သို့သျော မသခြောမရရောမှုကား ရှိနဆေဲပါပဲ။ သို့သျောဘယျသူတပျအပျပွောနိုငျမှာလဲ၊ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဗမာဘုရငျ့တျောဝငျရထားလုံးကွီ
းပွနျပျေါလာတာကိုဗမာပွညျသူ ကြှနျတျောတို့မွငျခငျြရငျမွငျရမှာပေါ့။ မြှျောလငျ့ခကျြထားခွငျးအတှကျဘာထိခိုကျမှု၊ဆုံးရှုံးမှု မှမရှိပါဘူး…..ကြှနျတျောပွောပွပေးတဲ့ဟာက အခကျြအလကျအခြို့မှားခငျြရငျမှားနနေိုငျတာမို့လို့ ကွိုတောငျးပနျထားပါရစေ၊အမှားတှပေ့ါက ဖွညျ့သာဖတျသှား ပေးကွပါခငျဗြ။
“အာလူးပွုတျကွောငျ့ မယုံနိုငျအောငျ အသားဖွူစတေဲ့ နညျးလမျး”
ရက်ရက်စက်စက် သိသိသာသာကို အသားဖြူ မြန်စေတဲ့ အာလူးပြုတ် အစွမ်း…..
ထူးထူးဆန်းဆန်း မျက်နှာ ကို သိသိသာသာဖြူစေတဲ့ အာလူးပြုတ် အစွမ်း ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီး နာမည်ကြီး တဲ့
အလှကုန် တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေ ကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့်၊
မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ် နည်းလမ်းအကြောင်းမျှ ဝေပေးပါရစေနော် … … ။
ဒီ နည်းလမ်း လေးဟာ သင့် မျက်နှာ ကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း လို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။
ပထမဆုံး အာလူး ကို ဆေးကြောပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ ။
နူးသွားပြီဆိုလျှင် အခွံခွာပြီး ကောင်းစွာ ကြိတ်ခြေပါ။
ပြီးနောက် အရောအနှောမပါသော ဒိန်ချဉ် အနည်းငယ်ကို ထည့်မွှေပါ … ။
ဒိန်ချဉ် မရှိလျှင် နွားနို့ ထည့်လို့ ရပါတယ်၊နောက်ဆုံးတွင် ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းနှင့် သံပုယိုရည် ၃စက်ခန့် ထပ်ထည့်မွှေလိုက်ပါ ။
အားလုံးနှံ့စပ်အောင် မွှေပြီးလျှင်တော့ မျက်နှာပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းထားလိုက်ပါ ။
နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင်တော့ ရေဖြင့် ဆေးကြော သန့်စင်နိုင်ပါပြီနော် ။
အာလူးပြုတ်မှာ ဗီတာမင်စီ နှင့် အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ဓါတ်တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဒိန်ချဉ် နှင့် ပျားရည် ကလည်း အသား ကို ဖြူဝင်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။
ဖော်ပြပါ နည်းလမ်း ကို တစ်ပါတ်လျှင် ၂ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်နှာ အသားအရေ ကို ဖြူဝင်းစေခြင်း ၊
တင်းရင်းစေခြင်း ၊ အမဲစက်များကင်းခြင်း ၊ ဝက်ခြံနှင့် အရေးအကြောင်း များဖြစ်ခြင်း တို့မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရကျရကျစကျစကျ သိသိသာသာကို အသားဖွူ မွနျစတေဲ့ အာလူးပွုတျ အစှမျး…..
ထူးထူးဆနျးဆနျး မကျြနှာ ကို သိသိသာသာဖွူစတေဲ့ အာလူးပွုတျ အစှမျး ဒီတဈခါတော့ ဈေးကွီး နာမညျကွီး တဲ့
အလှကုနျ တှေ သုံးစရာမလိုဘဲ မကျြနှာအသားအရေ ကို သိသိသာသာ ဖွူဝငျးစနေိုငျမယျ့၊
မှျောဆနျဆနျ အာလူးပွုတျ နညျးလမျးအကွောငျးမြှ ဝပေေးပါရစနေျော … … ။
ဒီ နညျးလမျး လေးဟာ သငျ့ မကျြနှာ ကို ခဏတာသာ ဖွူဝငျးစတောမဟုတျဘဲ ထာဝရဖွူစနေိုငျတဲ့ နညျးလမျး လို့တောငျ တငျစားကွပါတယျ။
ပွီးနောကျ အရောအနှောမပါသော ဒိနျခဉျြ အနညျးငယျကို ထညျ့မှပေါ … ။
ဒိနျခဉျြ မရှိလြှငျ နှားနို့ ထညျ့လို့ ရပါတယျ၊နောကျဆုံးတှငျ ပြားရညျ လကျဖကျရညျ ၁ဇှနျးနှငျ့ သံပုယိုရညျ ၃စကျခနျ့ ထပျထညျ့မှလေိုကျပါ ။
နာရီဝကျခနျ့ကွာလြှငျတော့ ရဖွေငျ့ ဆေးကွော သနျ့စငျနိုငျပါပွီနျော ။
အာလူးပွုတျမှာ ဗီတာမငျစီ နှငျ့ အသားအရအေတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ဓါတျတှေ အမြားကွီးပါဝငျပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ဒိနျခဉျြ နှငျ့ ပြားရညျ ကလညျး အသား ကို ဖွူဝငျးစနေိုငျတဲ့အစှမျးကို ပေးစှမျးနိုငျပါသေးတယျ။
ဖျောပွပါ နညျးလမျး ကို တဈပါတျလြှငျ ၂ကွိမျခနျ့ ပွုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ မကျြနှာ အသားအရေ ကို ဖွူဝငျးစခွေငျး ၊
တငျးရငျးစခွေငျး ၊ အမဲစကျမြားကငျးခွငျး ၊ ဝကျခွံနှငျ့ အရေးအကွောငျး မြားဖွဈခွငျး တို့မှလညျး ကာကှယျပေးနိငျတာပဲဖွဈပါတယျ။
“၁၅ မိနဈအတှငျး ခွထေောကျနဲ့လကျ ဖွူဖှေးသှားစမေယျ့ နညျးလမျးတဈခု”
၁၅ မိနစ်အတွင်း ခြေထောက်နဲ့လက် ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု…
သင့်ခြေထောက် လက် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က
ညိုတဲ့နေရာတွေ ဆဲသေတွေကို ဒီဖော်မြူလာနဲ့
အဆင့်နှစ်ဆင့် က ဒီလိုပါ။
သင့်တံတောင်နဲ့ ဒူးကို လိမ်းလိုက်ပါ။
၅ မိနစ် ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။
ဗီတာမင် အီး ဆေးသုံးလုံး
ဂလစ်စရင်း အလှဆီ တစ်ဇွန်း
နွားနို့ ၃ ဇွန်း
အရည်ပုံစံလုပ်ပြီး သင့်ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ကို
လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ထားပေးပါ။
ဒီအဆင့် နှစ်ဆင့်ကို တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ်လုပ်ပေးပါ။
၁၅ မိနဈအတှငျး ခွထေောကျနဲ့လကျ ဖွူဖှေးသှားစမေယျ့ နညျးလမျးတဈခု…
သငျ့ခွထေောကျ လကျ ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈပျေါက
ညိုတဲ့နရောတှေ ဆဲသတှေကေို ဒီဖျောမွူလာနဲ့
အဆငျ့နှဈဆငျ့ က ဒီလိုပါ။
သငျ့တံတောငျနဲ့ ဒူးကို လိမျးလိုကျပါ။
၅ မိနဈ ညငျသာစှာပှတျပေးပါ။
အရညျပုံစံလုပျပွီး သငျ့ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈကို
လိမျးပွီး မိနဈ ၂၀ ထားပေးပါ။
ဒီအဆငျ့ နှဈဆငျ့ကို တဈပတျမှာ သုံးကွိမျလုပျပေးပါ။
ကြက်ဥရောင်းနေတဲ့ အဘိုးအို တစ်ဦးကို အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က မေးလိုက်တယ် ။
” ကြက်ဥ တစ်လုံး ဘယ်လောက်လဲ ”
” ကြက်ဥ တစ်လုံး ၁၀၀ ပါ ” တဲ့ ။
အဲဒီ အမျိုးသမီးက အဘိုးအိုကို..
” ကျွန်မ ၁၀ လုံး ယူမယ် လေ.. ၉၀၀ ပဲ ထား.. မရရင်တော့ မယူတော့ဘူး ” လို့ ဆစ်တော့ အဘိုးအိုက..
” ဈေးဦးပေါက်မို့ ယူသွားပါ သမီးရယ် ၊ ဒီနေ့ တစ်လုံးမှ မရောင်းရသေး လို့ပါ ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။
အမျိုးသမီးက ကြက်ဥတွေ ယူပြီး အောင်ပွဲ ခံခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ ဟန်ပန်နဲ့ ကြက်ဥသည် အဘိုးအိုရဲ့ ရှေ့က ထွက်ခွာသွားတယ်။
ပြီးတော့ လှပတဲ့ ကားကလေး ပေါ် တက်ပြီး အဖော်နဲ့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို သွားစား ကြတယ် ။
သူတို့ ကြိုက်တာတွေ မှာစားကြတယ်။ နည်းနည်းသာ စားပြီး ချန်ထား ခဲ့တာ တွေက အများကြီးပဲ။ ငွေရှင်းတဲ့အခါ ၃၂၄၀၀ ကျတယ်။
ဆိုင်ရှင်ကို ၃၃၀၀၀ ပေးပြီး ပိုတာ ပြန်မအမ်း နဲ့တော့လို့ ပြောရင်း ခပ်ကြွားကြွား ထွက်လာခဲ့ ကြတယ်။
ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံ ပြန်မအမ်းခိုင်း တာက ဆိုင်ရှင်အတွက် ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ တကယ့် ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ ကြက်ဥသည် အဘိုးအို အတွက် ကတော့ အင်မတန် နာကျင်ဖွယ်ရာ ပေါ့။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁) ။ ချို့တဲ့ပြီး ငွေကြေး လိုအပ်နေသူတွေဆီက တစ်ခုခု ဝယ်ယူတဲ့ အခါ ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့ အာဏာ ပြရ တာလဲ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၂) ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီက ရက်ရောမှုကို မလိုအပ်တဲ့ သူတွေကို ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့က စေတနာ ပြချင် ရတာလဲ။
ကွကျဥရောငျးနတေဲ့ အဘိုးအို တဈဦးကို အမြိုးသမီး တဈယောကျက မေးလိုကျတယျ ။
” ကွကျဥ တဈလုံး ဘယျလောကျလဲ ”
” ကွကျဥ တဈလုံး ၁၀၀ ပါ ” တဲ့ ။
အဲဒီ အမြိုးသမီးက အဘိုးအိုကို..
” ကြှနျမ ၁၀ လုံး ယူမယျ လေ.. ၉၀၀ ပဲ ထား.. မရရငျတော့ မယူတော့ဘူး ” လို့ ဆဈတော့ အဘိုးအိုက..
” ဈေးဦးပေါကျမို့ ယူသှားပါ သမီးရယျ ၊ ဒီနေ့ တဈလုံးမှ မရောငျးရသေး လို့ပါ ” လို့ ပွနျဖွတေယျ။
အမြိုးသမီးက ကွကျဥတှေ ယူပွီး အောငျပှဲ ခံခဲ့ပွီ ဆိုတဲ့ ဟနျပနျနဲ့ ကွကျဥသညျ အဘိုးအိုရဲ့ ရှကေ့ ထှကျခှာသှားတယျ။
ပွီးတော့ လှပတဲ့ ကားကလေး ပျေါ တကျပွီး အဖျောနဲ့ တနျဖိုးကွီးတဲ့ စားသောကျဆိုငျကို သှားစား ကွတယျ ။
သူတို့ ကွိုကျတာတှေ မှာစားကွတယျ။ နညျးနညျးသာ စားပွီး ခနျြထား ခဲ့တာ တှကေ အမြားကွီးပဲ။ ငှရှေငျးတဲ့အခါ ၃၂၄၀၀ ကတြယျ။
ဆိုငျရှငျကို ၃၃၀၀၀ ပေးပွီး ပိုတာ ပွနျမအမျး နဲ့တော့လို့ ပွောရငျး ခပျကွှားကွှား ထှကျလာခဲ့ ကွတယျ။
ပိုတဲ့ ပိုကျဆံ ပွနျမအမျးခိုငျး တာက ဆိုငျရှငျအတှကျ ဘာမှ မထူးခွားတဲ့ တကယျ့ ဖွဈရိုး ဖွဈစဉျ ပါပဲ။
ဒါပမေဲ့ ဆငျးရဲတဲ့ ကွကျဥသညျ အဘိုးအို အတှကျ ကတော့ အငျမတနျ နာကငျြဖှယျရာ ပေါ့။
မေးခှနျးနံပါတျ (၁) ။ ခြို့တဲ့ပွီး ငှကွေေး လိုအပျနသေူတှဆေီက တဈခုခု ဝယျယူတဲ့ အခါ ဘာလို့ ကြှနျတျောတို့ အာဏာ ပွရ တာလဲ။
မေးခှနျးနံပါတျ (၂) ။ ကြှနျတျောတို့ ဆီက ရကျရောမှုကို မလိုအပျတဲ့ သူတှကေို ဘာလို့ ကြှနျတျောတို့က စတေနာ ပွခငျြ ရတာလဲ။